USony uzisa i-Sony Xperia T, ihashe elitsha lemfazwe lenkampani | I-Androidsis
Ndiyoyika lonto Xperia S, Iintsuku zibalwa njengeflegi yenkampani yaseJapan. Kwaye ukuba u-Sony usandula ukwazisa Sony xperia t, Irhamncwa eligqiba ubathathu emnye waseJapan owenziwe leli rhamncwa kunye nabantakwabo abancinci u-Sony Xperia V kunye no-Xperia J.
Kwaye i-Sony Xperia T iqhuma kwintengiso yee-smartphones eziphezulu kunye ne-Android ngenxa yeempawu zayo ezizodwa. Kuya kufuneka ubone eyakho Isikrini se-4.55-intshi, isisombululo se-HD 1280 × 720 Iiphikseli ngetekhnoloji ye-Injini ye-BRAVIA yeselfowuni ukufumana incasa yokubalula kwabo.
U-Sony uqobo ubephethe ukungqina ukuba sinokubukela iividiyo ze-HD 1080 kule smartphone ngaphandle kwengxaki. Kodwa le nto ayipheleli apho kuba irhamncwa elitsha lakwaSony liya kubandakanya umsebenzi omtsha obizwa ngokuba Lala ubuthongo eya kusivumela ukuba sihambe kwimowudi yokulala sithathe ifoto ngoko nangoko, ngaphandle kokuvula i-terminal.
Kwelinye icala, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba I-Sony Xperia T iya kuba nokunxibelelana kwe-NFC kwaye iya kuxhasa itekhnoloji kaSony yeTouch enye, esivumela ukuba sithumele idatha kwezinye izixhobo ezihambelanayo ngokusondeza iiterminali.
Okokugqibela qaphela ukuba I-Xperia T iya kubandakanya ukuphuma kwe-MHL, ekuvumela ukuba uguqule i-micro-USB port yakho kwi-HDMI ngokusebenzisa i-Xperia TV dock evumela ukuba wonwabe kumxholo we-HD nakwesiphi na isixhobo esifanelekileyo.
Ukubuyela kwimilinganiselo yayo "yesiqhelo" yokuchaza ukuba iSony Xperia T iya kuba nayo Iprosesa ye-4GHz ye-Snapdragon S1.5 engumbini eya kuvumela i-smartphone ukuba ixhase nasiphi na isicelo esisibeka kuyo.
Ukongeza kokuba Isatifikethi sokudlala kunye nerediyo ye-FM, i-Xperia T iza ne-Android 4.0.4 nangona sele beqinisekisile ukuba izakuhlaziywa kungekudala kwi-Android Jelly Bean.
Ukusuka kwaSony bathembisile ukuba irhamncwa elitsha lakwaSony liza kufika phambi kwabantakwabo abancinci. Ngale ndlela, nangona singazi ixabiso elisemthethweni, kucacile ukuba i-Sony Xperia T izakufika kwintengiso kwezi veki zimbalwa zizayo. Lixesha lokophula i-piggy bank ...
Iinkcukacha ezithe xaxe - I-Sony Xperia S iya kuba nokhuseleko lwe-anti-smudge kunye nenkqubo yokutshaja ngokukhawuleza, I-Sony Xperia V, i-smartphone entsha yenkampani engenawo amanzi kunye netekhnoloji ye-NFC One Touch, U-Sony uveza ngokusesikweni i-Sony Xperia J
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sony » I-Sony Xperia T, irhamncwa likaSony ekugqibeleni lityhilwe
Isiseko esibini ngoku?
Bendicinga njengeqabane lakho kodwa makhe sijongane nayo. Kutheni le nto sifuna iprosesa ye-quad-core? Namhlanje kukho imidlalo emine enokuthi isebenzise iprosesa eyintloko-engaphakathi kakuhle, ke ndicinga ukuba amandla e-Xperia T angaphezulu ngokwaneleyo ukuba angatsala nayiphi na imoto ngaphandle kwengxaki. Kwakhona, njengoko izinto zihamba, ukuthetha ngezobuchwephesha, kunyaka omncinci iXperia T iyakuphelelwa ngumhla ...
Ukuba iprosesa engaphezulu sele ingumbandela wentengiso ukuba uqaphele, ukuba neprosesa engaphezulu ayithethi ukuyisa kumda, ingumbandela we «amampunge» kananjalo akukho zininzi iinkqubo ezizisebenzisayo, imidlalo kuphela kodwa Nantso into psvita
Ingakanani inkumbulo yegusha eya kuba nayo le Xperia?
Imemori ye-1GB 😉
Luya kuba luphi usuku kwintengiso eSpain?
Kulungile, uyabona ndifuna ukuthenga iselfowni yakwaSony kodwa andithathi sigqibo phakathi kweXperia SL okanye iXperia T, yeyiphi onokuthi undicebise yona ????
OMNYE UMNTU ANOKUNDixELELA UKUBA IXERIA T ISELE ILUNGILE EMEXICO
NGOKUGQWESILEYO NDANDIKHE NDANAYO AMAVA AM A T PHONE PHOLILE
Javier T. sitsho
Ndingumlandeli weSonyEricssion kwaye ukusukela kutshintsho lwenziwe nguSony, khange ndilindele ukufumana ifowuni enjalo, ifowuni NGULE. Ukusebenza okungcono kunabanye abaninzi.